के तँपाईकाे वाइफाईकाे सिग्नल कमजोर छ ? अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय - Purbeli News
के तँपाईकाे वाइफाईकाे सिग्नल कमजोर छ ? अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ २१, २०७६ समय: ११:०३:१०
इन्टरनेटको तरंगलाई यसरी दिशा परिवर्तन गराउँदा विभिन्न बाधामा कमी आउने गर्दछ । यसले वाइफाईको सुरक्षामा पनि वृद्धि गर्दछ । डार्टमाउथ शोधकर्ताहरूले वाइफाई तरंगलाई आफूले चाहेको ठाउँमा निर्देशित गर्नका लागि आल्मुनियम फोइलको थ्रिडी प्रिन्टेड मोडेल तयार पारेका छन् । यस्तो आल्मुनियम प्यानल घरमै पनि तयार गर्न सकिन्छ । जसका कारण वाइफाई अरूले चोरेर चलाउने र सिग्नल कमजोर हुने समस्या कम हुन्छ ।